Sina YEJ2 andian-tsarimihetsika elektromagnetika andiany telo tsy mihetsika sy mpamatsy | Leadrive
IE1 Motera asynchronous dingana telo
IE2 maotera asynchronous dingana telo
IE3 Motera asynchronous dingana telo
MS Aluminium akorany motera asynchronous dingana telo
Rosiana manara-penitra môtô (Power Base kely ambony)
Môtô asinkronina dingana telo ho an'ny reducer fitaovana
Môtô tsy mitambatra dingana telo ho an'ny paompy
Môtô tsy mitongilana dingana telo ho an'ny milina vato sy milina fanaovana hazo
Môtô asynchronous dingana telo-cooled
YB3 Motera tsy mirehitra telo mirehitra
Motor YD2 miovaova haingam-pandeha haingam-pandeha tsy miova
YEJ2 elektrônagnetika fanerena moto tsy mitambatra dingana telo
YVP miovaova hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha asynchronous dingana telo
YXP Motera tsy mitambatra dingana telo ho an'ny ady amin'ny hafanana avo lenta sy ny setroka setroka
YXP andiany hafanana miady amin'ny hainandro avo lenta ...
YEJ2 andian-tsarimihetsika elektromagnetika andian-dahatsoratra ...
Môtô asinkronina dingana telo ho an'ny fikolokoloana vato ...
IE3 andian-tsarimihetsika avo lenta avo lenta asynchr ...
IE2 andian-dahatsoratra avo fahombiazan'ny dingana telo tsy mifanaraka ...
YEJ2 andian-tsarimihetsika electromagnetic andian-dahatsoratra mandrisika telo
Ity andiana môtô ity dia miaraka amina frein elektromagnetika eo amin'ny faran'ny tsoroka-motera. Rehefa very herinaratra ny motera, ny kapila vita amin'ny frezy elektromagnetika dia tsindriana avy hatrany eo amin'ny fonony aoriana amin'ny motera mba hiteraka tselatra fanenjanana.
Ajanony ny motera, ary ny fotoana tsy fanidiana tsy misy enta-mavesatra dia avy hatrany amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, 0.15 ~ 0.45S. Ity andiana motera ity dia be mpampiasa amin'ny fitaovana milina fanodinana mekanika ary mampita ny milina sy ny fonosana, ny hazo, ny sakafo, ny Masinina ho an'ny simika, ny lamba, ny fananganana, ny fivarotana, ny varavarana mihodina, sns.
◎ Fomba fanidiana: tapaka ny herin'ny herinaratra
Làlana: Famonoana frein
◎ Hery / Hery: 0,55 ~ 45kW
◎ Fomba fanitsiana: fanitsiana ny onja-antsasaky ny onja
Làlana: Manitsy ny antsasaky ny onja
Ny tambajotram-barotra an'ny Lijiu Motor dia niely tamin'ny faritany sy tanàna 20 mahery, toy ny avaratra atsinanana, avaratra andrefana, avaratra, afovoany, atsimo, atsimo andrefana ary atsinanan'i Sina. Ny vokatra dia aondrana any Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana ary firenena sy faritra hafa.
Lijiu Motor dia manokana amin'ny famokarana, R&D ary ny fivarotana maotera isan-karazany. Ny vokatra dia misy ny YE2, YE3, YB3, milina fanamafisam-peo, YD2, YEJ2, YVF2, YC / MC, YL ary andian-dahatsoratra hafa misy motera tsy mifanaraka telo sy ireo motera manokana manokana. Ny vokatra dia mandray ny volavola nasionaly mirindra, ary ny haavon'ny herinaratra sy ny haben'ny fametrahana dia mifanaraka amin'ny fenitra IEC an'ny Vaomiera Iraisampirenena Iraisam-pirenena. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazana avo lenta sy ny fitsitsiana angovo, ny herinaratra fanombohana avo, ny tabataba ambany, ny fihoarana ary ny fahamendrehana avo lenta. Ny vokatra dia nandalo ny fanamarinana CE an'ny Vondrona Eoropeana ary ny mari-pahaizana CCC sy CQC any Sina. Nahazo fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena ISO9001 ny orinasa. Lijiu Motor dia manolo-tena hanome vahaolana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa indostria sy angovo, manamboatra motera manokana.
Previous: YD2 andian-tsarimihetsika miova amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha telo tsy matanjaka
Manaraka: YVP andian-dahatsoratra asynchronous dingana telo ho an'ny fifehezana hafainganam-pandeha miovaova
YVP andian-dahatsoratra asynchronous dingana telo ho an'ny ...
IE1 andian-dahatsoratra asotronika dingana telo
Maotera tilikambo hihena
Môtô asynchronous dingana telo ho an'ny grindi vato ...
IE2 andiany avo lenta asynchro dingana telo ...